I-China IP66 yaManzi yaNgaphandle ye-Slim Motion ye-Slim Motion iSensor ye-LED yesiKhukula sokuKhanya kweSibane soShishino lwe-100W 50W 30W 20W 10W isibane se-LED abavelisi kunye nababoneleli | Kasem
IP66 yaManzi yaNgaphandle ye-Slim Motion Sensor ye-LED yokuKhanya okuKhanyayo kwesibane soShishino lwe-100W 50W 30W 30W 20W 10W isibane se-LED
I-Voltage Input (V): AC175-265V
I-Engile yeBeam (°): I-120 Degree
UBomi bokusebenza (Iyure): 50000
Isibane soMzimba weMathiriyeli: iAluminiyam
Inombolo yoMfanekiso: Inzwa ye-F-10W/20W/30W
Isicelo: Igadi, isikwere/isakhiwo/intengiso/umthi/
Isibane esiLuminous Flux(lm): 5500
Ubushushu bokusebenza(℃): -20 - 50
Iwaranti (Unyaka): 5-Year
Ukusebenza okukhanyayo(lm/w): 110
Uhlobo lwento: Izibane zesikhukula
Ubushushu boMbala(CCT): Mhlophe ecocekileyo
Iwaranti: 2 iminyaka
Ikhowudi yeHS: 9405409000
Umthombo wokukhanya kwe-LED: SMD2835
I-engile yeBeam: 120deg
Umzekelo No Amandla/w Ubungakanani bokukhanya Iichips ze-LED Into evikela amanzi I-PcSICTN Ubungakanani bokupakisha
KASEM-10W sMD 10w 10*8*2 2835 SMD IP65 70pcs/ctn 49.5*21*22.5
KASEM-20W SMD 20w 11.7*9.2*2.7 2835 SMD IP65 60pcs/ctn 39*32.5*23
KASEM-3ow SMD 30w 16*12.1*2.3 2835 SMD IP65 60pcs/ctn 51.5*32.5*29
KASEM-5ow coB 50w 20.6*16*2.9 2835 SMD IP65 40pcs/ctn 43.5*37.5*35
KASEM-10ow coB 100w 27*21.4*3 2835 SMD IP65 20pcs/ctn 44.5*39.5*29
KASEM-150w coB 150w 32*24*4 2835 SMD IP65 10pcslctn 42.5*34"25
KASEM-20ow coB 200w 37.8*27.8*4 2835 SMD IP65 10pcs/ctn 47.5*40"30
KASEM-30ow coB 30ewe 45*34*5.8 2835 SMD IP65 10pcs/ctn 47.5*40*30
❶[I-Intelligent Sensitive Detector]: I-Outdoor Motion Sensitive Sensor Izibane ze-LED zineendlela ezintathu zokuseta-Ixesha lokuva (ubuntununtunu 6-360s adjustable), umgama wokuva (1-12 yeemitha ezilungelelanisiweyo), isivamvo soluvo (ukwahlula ngokuzenzekelayo phakathi kwemini nobusuku, sinokuba Isetelwe ukuvula kuphela ebusuku, iPIR (Passive Infrared) izixhobo zokujonga intshukumo zisetyenziselwa ukubona intshukumo yabantu, izilwanyana okanye ezinye izinto.
❷ [Ukugcinwa kwamandla + ukuKhuselwa kokusiNgqongileyo]: Izibane zangaphandle zesivamvo zezikhukhula zi-CE kunye ne-FCC eqinisekisiweyo kunye ne-UL eqinisekisiweyo yeplagi esemgangathweni yase-US.Xa kuthelekiswa nezibane ze-halogen zendabuko, izibane zethu zingaphila malunga neeyure ze-50,000, zigcina ngaphezu kwe-80% yamatyala ombane kunye nokuphumeza Ukukhanya okufanayo kweeglowubhu ze-80W, Nokuba amandla e-AC aguquguquka phakathi kwe-85-265V, inokusebenza ngokuqhelekileyo. Izibane ezikhanyayo azinayo i-UV, i-IR okanye enye imitha eyingozi.
❸[Okuhlala ixesha elide+Ukhuseleko]: Iwasha eludongeni isibane sangaphandle yamkela i-die-cast aluminium casing kunye ne-aluminiyam engaphezulu yesinki yobushushu ukuze ibonelele nge-aluminiyam ekwinqanaba eliphezulu le-aluminiyam yokulahla ubushushu kunye nemaski ekumgangatho ophezulu weglasi. Inobomi benkonzo ukuya kuthi ga kwiminyaka emi-3 kwaye iichips ezikumgangatho ophezulu ziqaqambile kwaye ziqaqambe. I-chip eqhelekileyo ehlala ixesha elide.
❹[Kulula ukuFakela + IP65 Ingangeni manzi]: Indawo egqunywe ngamanzi inesibiyeli sentsimbi esandisiweyo nesijiyileyo esinokulungiswa ngokukhuselekileyo nangokuthembeke ngakumbi kwiisilingi, iindonga kunye nemigangatho. Ingasetyenziselwa imvula, ikhephu, kunye nekhephu. Ifanelekile ukukhanyisa kwangaphakathi nangaphandle, ingasetyenziselwa iipaseji zokungena, izitebhisi, i-terraces, i-terraces kunye neigaraji.
I-1, Ukusebenza kwamandla aphezulu
Akukho UV, IR okanye enye imitha yokucima; Akukho mercury, ikhuselekile, izinzile kwaye inokwethenjelwa
2, IP65 Ukungangeni manzi
Izibane zeSensor floodlights ziyi-IP65 ekalelelwe ukusetyenziswa ngaphakathi nangaphandle.
3, Izinto eziZimayo
I-aluminium casing esemgangathweni inomsebenzi ongcono wokutshatyalaliswa kobushushu, okwenza izibane zikhuseleke ngakumbi kwaye zihlale zihlala.
Ilungele inkqubo yombane ophantsi
Ifanelekile kwiimfuno zakho njengesibane sokhuseleko. Amandla aphantsi kwiibhetri zeSolar.
Umsebenzi woluvo lweMotion
Uvakalelo yi-0-8m, ixesha lokusebenza 6s-8mins kunye ne-Day & Moon mode. Uyakwazi ukulungelelanisa iindlela eziguquguqukayo ukuhlangabezana neemfuno zakho.
Itshiphu ye-LED eqaqambileyo:
Sebenzisa itshiphu ye-LED eshushu eqaqambileyo ukwenza isibane sesikhukula. I-chip yomgangatho ophezulu inokukhupha ubushushu bombala oqaqambileyo kunye nobumnandi.
Iglasi ehlala ixesha elide kwaye eyomeleleyo enobushushu inokuthintela ukukhanya kwenzwa eluthulini kwaye kuya kwenza umzimba okhanyayo ukuba womelele ngakumbi.
Inzwa yentshukumo ye-PIR:
Isivamvo sentshukumo esihlakaniphile sinokuvula/sicime isibane sesikhukula ngokuzenzekelayo. Akukho mfuneko yokutshintsha ngesandla kwakhona!
Isibiyeli esinokulungiswa 180°:
Isibiyeli esinokulungiswa sinokubonelela nge-engile yokukhanyisa oyifunayo
4, ukuqaliswa okunokulungiswa:
Imo yokungeniswa, ixesha lokuva, umgama wokuva unokulungiswa
Ngaphambili: I-AC170-265V yomgangatho ophezulu wombane wesikhukula esincinci esikhokelela kwisikhanyiso esincinci sesikhukula
Okulandelayo: Indawo entsha yezibane yangaphandle isibane isibane selanga sokuhombisa isibane sesitiya sesitalato 40W Isibane se-LED sangaphandle sesiKhukula sesiGadi